Mpikalo: namoaka mpikabary miisa 667 | NewsMada
Mpikalo: namoaka mpikabary miisa 667
Anisan’ireo fikambanana velona eo anivon’ny fiangonana katolika ny Mpikalo. Manam-porofo izany ny famoahana mpikabary. Ny fanandratana izny kolontsaina malagasy izany rahateo no imasoany.
Niampy 667 indray ireo mahafehy ny kabary rehefa niofana nandritra ny sivy volana teo anivon’ny Mpikalo na ny Mpikabary katolika. Notanterahina, ny asabotsy teo, tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina, ny lanonana famoahana azy ireo sy ny fizarana mari-pahaizana.
Nisalotra ny anarana « Lucien Botovasoa » ity andiany faha-13 ity. Misy antony manokana ny nisafidian’izy ireo izany anarana izany. Kristianina, mpikatroka fransiskanina sady tia tanindrazana ary maty maritiora i Lucien Botovasoa. Araka izany, mifandraika tanteraka amin’ny tanjon’ny Mpikalo ity anarana nosafidina manokana ity. Ho an’ny Mpikalo, ampitaina amin’ny mpiofana ny soatoavina maha kristianina sy ny soatoavina maha Malagasy.
Tsy mifidy taona ny fianarana kabary ary tsapa ho mihamaro ny tanora liana amin’izany. Na izany aza, eny anivon’ny fiarahamonina, hita ho mihen-danja ny fankatoavana ny soatoavina maha Malagasy, toy ny fifanajana sy ny fahaiza-miaina, araka ny nambaran-dRakotomalala René, filohan’ny Mpikalo. Tsy atao hahakivy anefa izany fa mitohy ny fanentanana, toy ny amin’ny sehatry ny fampianarana kabary.
Mizara roa ireo mpiofana: ny sokajy taninketsa, ahitana ireo ankizy manomboka amin’ny enina taona. Ao koa ny tanora sy ny olon-dehibe. Miainga amin’ny fototra ny fianarana, mandalo amin’ny kabary an-karatsiana ary faranana amin’ny kabary an-kafaliana miampy fampianarana manentana.
Nosantarina tamin’ny hira sy ny dihy mirindra ary ny fizarana mari-pahaizana ny fotoana, ny asabotsy teo. Ny tolakandro kosa, marobe ny olo-manan-kaja sy tomponandraikitra tonga nanotrona ny lanonana ofisialy.